Wararka Maanta: Talaado, Aug 18, 2020-Waddooyinka hal bawlaha u ah Itoobiya oo maanta xidhan
Sababta ka dambaysa jidadka la xiray ayay dhalinyarta Qeerro ku tilmaameen inay ku cabbirayaan sida ay uga xun yihiin xadhigga siyaasiyiin magac wayn kuleh gudaha degaanka Oromiya oo uu kamid yahay Jawhar Maxamed.
Dhinaca kale dawladda Itoobiya ayaa shacabka uga digtay inay ka qayb qaataan rabshadaha iyo banaanbaxyada ay qorshaynayaan dhalinyarada Qeerro inay maanta ka hirgaliyaan degaanka Oromiya.
Ciidamo aad u tiro badan oo kamid ah kuwa qaranka ee Itoobiya ayaa shalay galinkii dambe ilaa xalay kusii qulqulayay magaalooyinka waawayn ee degaanka Oromiya oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan rabshado ay sameeyaan dhalinyarada Qeerro.
Degaanka Oromiya ayaa ku yaal badhtanka Itoobiya, sidoo kale waddooyinka hal bawlaha u ah Itoobiya iyaguna waxay maraan degaanka Oromiya, marka ay rabshado ka bilowdaan degaanka Oromiya waxaa xidhma guud ahaan isu socodka dalka Itoobiya.
Arrimahan ka dhacaya Itoobiya ayaa kusoo hagaagaya xilli qawmiyado kamid ah Itoobiya ay rabaan inay degaan gaar ah noqdaan dawladduna ka diidan tahay iyadoo laga cabsi qabo burbur ku yimaadda dalka.
Abiyi Axmed Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya ayaa in badan ku celceliyay inay Itoobiya burburin karin koox yari, dalkuna yahay mid lawada leeyahay.
Lama garan karo waxa ay ku dambayn xaaladda adag ee maanta ka jirta dalka Itoobiya, iyadoo Qeerro ay ku adkaysanayso inay xidhaan waddooyinka, dawladduna ay ballan ku qaaday inay tallaabo ka qaadayso cid kasta oo isku dayda inay waddooyinka xirto ama rabshado samaysa.